Wafdi ay hoggaaminayaan Madaxweynayaashii hore oo ku wajahan Beledweyne – Hornafrik Media Network
Weriye iyo xubno kale oo loo heysto Shabaab-nimo oo maanta lagu riday xukuno culus
Kulan degdeg ah oo Dhuusamareeb uga socda baarlamaanka Galmudug
Wafdi uu hogaminaayo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheikh Axmed ahna guddoomiyaha madasha xisbiyada qaran ee ay ku midoobeen xubnaha mucaaradka ah ayaa maanta ku wajahan magalaada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo ay saameen ku yeelatay fataahada wabiga Shabeelle oo mara magaladaasi.
Xubnahaan ku sii jeedo maanta magaalada Baladweyne ayaa waxaa kamid ah madaxweynhii hore ee Soomaliya Xasan Sheikh Maxamuud iyo xubno badan oo ka tirsan madasha xisbiyada qaran.
Madasha Xisbiyada ayaa xalay waxa ay magacaabeen Guddiga gurmadka fatahaadaha, iyadoo gargaar ka socda Madasha oo loogu tala galay dadka ku barakacay fatahaadaha la geyn doono deegaano ka tirsan gobolada dalka oo ay saameen ku yeesheen fatahadaha wabiyada Jubba iyo Shabeele iyo daadad ku soo rogmaday ka dib roobab ka da’ay.
Hoggaanka Madasha Xisbiyada ayaa sheegay inay qeyb ka yihiin dadaalada loogu gurmanayo dadka ku barakacay fatahaadaha, waxaana madasha gaarsiin doonaan gargaar kala duwan deegaanada ay fatahaadaha ka dhaceen.
Magalada Beledweyne ayaa waxaa ka taagan xaalad adag oo dhanka nolasha ah, kadib markii magalaadaas uu ku fatahad wabiga Shabeelle biyuhuna ka kormareen.
Booliska dalka Bolivia oo ku biiray dibad baxyo looga soo horjeedo Madaxwaynaha dalkaas.